Soomaaliya oo ka jawaabtay dacwadda Muranka Badda. – Hornafrik Media Network
Soomaaliya oo ka jawaabtay dacwadda Muranka Badda.
By HornAfrik	 On Jun 18, 2018
Hornafrik-Wafdi uu hoggaaminayo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo ku sugan gudaha Maxkamadda Caalamiga ee Garsoorka (ICJ) ee magaalada Hague, ayaa gudbiyay jawaabta gal dacwadeedka muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Axmed Cali Daahir iyo qareenada la socda oo ay ka mid yihiin Dr. Muna Al Sharman iyo Danjiraha Soomaaliya ee Midowga Yurub Dr. Cali Said Faqi ayaa la filayaa inay la hadlaan Warbaahinta, si ay faahfaahin uga bixiyaan Jawaabta Gal dacwadeedka ay gudbiyeen.
Galka Dacwadeedkan ayaa waxaa lagu balansanaa in Ergadan mataleysa Soomaaliya ay Maxkamadda ku wareejiyaan maanta oo ay ku beegantahay Taariikhda 18/06/2018 saacadu Bariga Afrika markey aheyd 4:30PM ama 3:30PM xilliga Netherlands.
Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo dhawaan Warbaahinta Qaranka la hadlay ayaa sheegay in Dowlada Soomaaliya aysan diyaar u aheyn Wada xaajood Dacwada Badda oo ay la gasho Kenya, wuxuuna xusay Wadada kaliya ee Murankan lagu xalin karo inay tahay go’aanka ay soo saarto Maxkamada Hague.
Kenya oo Askar looga dilay qarax ka dhacay Wajeer.
Askari ka tirsan ciidanka dowladda oo askari kale ku dilay Muqdisho.